လင်းယံခ: April 2013
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:44 AM
သတိပြုရန် - 450Mhz hendset အတွင်း ထည့်သွင်း မသုံးမိစေရန်။
Dear 959330-----, You have been Activated. Your balance is (credit)300.00and will be expired at 2013-05-09 00:00:00.
အဆိုပါ ၁၅၀၀တန် ဆင်းကဒ် ပျောက်ဆုံးပါက ၂၀၀၀၀ိ/-ကျပ်၊ ပျက်စီးမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်းမန်နေဂျာရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု ကြေညာထားပါသည်။အဝင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၄ကျပ်ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး မကြာမီကာလတွင် အင်တာနက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 8:23 PM
ဒီလအတွင်းမှ အဖက်ဖက်က အခြေအနေကောင်းတွေ ကြုံလာမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အထူးတိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ကာလ သမယပါပဲ။ မိတ်ကောင်း ဆရာကောင်းတွေ တွေ့မယ်။ စပါတူ ရှယ်ရာ အလုပ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေ အထူးကောင်းပါတယ်။ ဆန်ဆီဆေးဆား၊ စက်မှု့၊ စာအုပ်၊ မြေ ၊ အမွေ၊ ဖုန်း ကိစ္စများမှာ အောင်မြင်မယ်။ အလှူအတန်း မင်္ဂလာကိစ္စများနဲ့လည်း ကြုံကြိုက်ရ တတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး လုပ်သလောက်၊ ကံပွင့်လန်း နေမယ့် ရက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်း တွေနဲ့တော့ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ လူရင်းတို့ရဲ့ မကောင်းသတင်း တချို့လည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အထည် ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ရွှေ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့ အတွက်တော့ စိပ်ရှုပ်ခေါင်းစား ရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူရည်စားများ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေကြုံလာမယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်ဆိုရင် အညံ့များနေတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးမယ်ဆိုရင် (၃၅)ပူးနေတဲ့ ထီလက်မှတ်ဟာ လာဘ်လာဘတွေ ခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒူး၊ နား၊ ရင်ဘတ်၊ သတိထားပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:43 PM
ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေလို့ ရွက်သစ်ဝေလည်း ကျွန်တော် သတိမထားမိခဲ့။ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က ရော်ရွက်ဝါတို့ နွေလေရူးနဲ့ တိုက်ကာလွင့်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော် သတိမထားမိခဲ့။ အိမ်ရှေ့က ပိတောက်ပင်ထက်ဝယ် ရွှေရည် ဝါလူး ပိတောက်ဖူးမှ တန်ခူးနီးမှန်း သိခဲ့ရသည်။ သြော်...ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်နီးလာပြီဘဲ ဆိုသော အတွေးနဲ့ ကျွန်တော် ကျုံးဘေးသို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးအတွက်...အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့အရာ (၄) မျိုး
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:18 AM
နာရီဟာရေဒီယိုသတ္တိကြွထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ်…နာရီဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးအချိန်ကြာကြာအိပ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးတွေအများကြီး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့….ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါနာရီကို ချွတ်ပြီးအိပ်ကြပါ..
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:15 AM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:38 AM
လေပြေတို့ တိုးဝှေ့လိုက်တိုင်း မန္တလေးတောင်ထက် စေတီမှ ပျံ့လွင့်လာသော သံစဉ်လေးများသည် စီးချက်ညီညီ ကျွန်တော့်နားထဲသို့ တိုးဝင်လာသည်။ ထိုနေ့က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမွေးနေ့။ မန်းလေးတောင်တက်ချင်သည်ဆိုလို့ မနက်စောစော နှစ်ယောက်သား ဆိုင်ကယ်နှင့် တက်လာကြသည်။ တပေါင်းနွေမနက်ရောက်သော်ငြားလည်း လေပြေညင်းတို့အထဲဝယ် အအေးဓါတ်က မကုန်သေးကုန်။